ထက်အောင်ကျော်| February 28, 2013 | Hits:6,377
9 | | ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် နော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အတူ တွေ့ရသည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website swe htwe March 1, 2013 - 12:44 am	Long live,Myanmars!!!